Iindlela ezine esiza kuzibona kwiifowuni ze-Android ngo-2019 | I-Androidsis
Imikhwa esiza kuyibona kwii-mobiles ze-Android kwi-2019
U-2019 uqalile nje kwaye kancinci kancinci ukwaziswa kokuqala kuza kuthi. Rhoqo ngonyaka kuhlala kukho iindlela ezithile kwintengiso ye-Android, njengokusebenzisa inotshi kunyaka ophelileyo. Ukujonga phambili kulo nyaka kukho iindlela ezininzi Kubonakala ngathi bazakuba nobukho obukhulu phakathi kweefowuni ezinenkqubo yokusebenza kaGoogle. Ke ngoko, sithetha ngabo.
Ke uyazi ukuba zeziphi iindlela ezinokubaluleka kakhulu kweli candelo lentengiso. Ukusukela thina lindela uninzi lweefowuni ze-Android ezihlangabezana nezinye okanye uninzi lwezi zinto.
1 Ukusonga iifowuni
2 Ikhamera yesikrini
3 Inani elikhulu leekhamera
4 Ingqondo yolwazi
Isamsung isetelwe ukuba ibe yeyokuqala ukumilisela ifowuni esongekayo kwintengiso, emva kokuba siyekile ukuyibona ngokufutshane ngoNovemba. Kodwa ayisiyiyo kuphela uphawu kwi-Android eya kuthi isungule ifowuni ngezi mpawu. Ngapha koko, veki nganye edlula ngaphezulu kwamagama iqinisekisiwe ukuba iyasebenza kwi-smartphone esongwayo.
Kule mpelaveki kuqinisekisiwe oko Kwakhona kugoogle isebenza kwiflip yefowuni. Uphawu lwaseMelika Joyina abanye abavelisi kwi-Android abaphuhlisa eyabo ifowuni yokusonga, enje Xiaomi, I-OPPO, Huawei o LG. Ngokuqinisekileyo amagama amatsha aya kongezwa kolu luhlu njengoko iinyanga zihamba. Into enomdla kukuba uphawu ngalunye luya kusebenzisa inkqubo eyahlukileyo ethembisa ukunika iintlobo ngeentlobo.
Enye yeendlela ze-2019, kodwa esele iqale ngoDisemba ukufikelela kwintengiso kwi-Android. Inotshi yenye yeendlela ezinkulu, kodwa kubonakala ngathi abavelisi abaninzi ngoku bafuna indlela yokuyiphepha. Ukufumana okuninzi kwesikrini, ezinye iimveliso ukudibanisa ikhamera yangaphambili yefowuni kwiscreen. Oku ngakumbi kunciphisa izakhelo zangaphambili zesixhobo.
NgoDisemba skwaye sele benikezele ngeemodeli ezintathu ngale khamera idityanisiweyo Kwisikrini. Eyokuqala yayiyi I-Galaxy A8s kunye ne Huawei Nova 4 yeza emva kweveki. Kanye ngaphambi kokuphela konyaka iNew V20. Kodwa kuyacaca ukuba siza kubona iifowuni ezininzi ze-Android ngalo mngxunya kwiscreen. Kwakhona, akukho nanye kwezi sele zikhankanyiwe ngaphambili.
Inani elikhulu leekhamera
IHuawei ibingowokuqala ukuqala oku ubuhlanga bokunyusa inani leekhamera zangasemva, Yazisa ezintathu kwiP20 Pro yayo. Kodwa izinto ziye zambi ngakumbi. Sele ngaphambi kokuphela konyaka, uSamsung wasishiya nefowuni yakhe yokuqala eneekhamera ezine zangasemva, i-Galaxy A9 2018. Kwaye kubonakala ngathi eli nani liphezulu leekhamera zangasemva ziya kuba yenye yeendlela zangoku ze-2019 kwi-Android.
Eyona nto inomdla kukuba le meko ifikelela kumanqanaba ahlukeneyo kwi-Android. Ngelixa kwaqala njengenye into kuluhlu oluphezulu, iimveliso zikwazisa inani elikhulu leekhamera kuluhlu lwazo oluphakathi. Ukujonga phambili ku-2019, AbakwaNokia bathembisa ukuba yenye yezona zibalulekileyo ekusebenziseni le meko, kunye neNokia 9 yakho kunye iikhamera zayo ezintlanu zangasemva. Kuya kuba ngumdla ukubona ukuba zingaphi iikhamera ezithi iimveliso zongeze kwiifowuni zazo kulo nyaka.
Ubukrelekrele bobugcisa kunye nokufunda ngomatshini kufike kwi-Android ukuhlala. Ziye zimbini zeendlela eziphambili kwinkqubo yokusebenza, Sele sithethile nawe ngamanye amaxesha. Iiprosesa zeefowuni sele zineeyunithi ezithile zokuyiqhuba. Ukongeza, ziyasetyenziswa nakwiikhamera zefowuni, kwiifoto ezingcono kunye neendlela ezongezelelweyo zeefoto.
Akunakuphikwa ukuba ziye zaba yinto ephambili yeefowuni ze-Android. Kwaye ithemba kukuba kwi-2019 siza kubona ukuba ukubalasela kwayo kunyuka njani nangakumbi. Ngokukodwa ngoku abaprosesa banemisebenzi engakumbi nangakumbi kwaye ubukho babo buthathelwa ingqalelo ngakumbi. Asinakulibala nokuba bubukrelekrele bokwenza oko ukunceda abazimasa, njengoko uMncedisi kaGoogle esebenza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Imikhwa esiza kuyibona kwii-mobiles ze-Android kwi-2019
USony uvimba ukusetyenziswa kunye nokufakwa kweRhafu kumabonakude nge-Android TV
Outrush ngumdlalo oqhelekileyo apho kuya kufuneka ulawule isiphekepheke sakho